Dablay ka tirsan Al-Shabaab oo lagu qabtay Gobolka Mudug | KEYDMEDIA ENGLISH
Dablay ka tirsan Al-Shabaab oo lagu qabtay Gobolka Mudug
Ciidamada Galmudug iyo kuwa Danab ee Xoogga Dalka, ayaa ka hor tagay isku day ay dabley ka tirsan Al-Shabaab ku doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka Koofurta Gobolka Mudug.
GAALKACYO, Soomaaliya – Ciidamada Daraawiishta Galmudug, Kumaamdooska Danab iyo Ciidan degaanka ah oo is kaashanaya, ayaa ka hor tagay dabley hubeysan oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo waday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa.
Howlagal ay xalay xilli danbe ciidamadu ka fuliyeen duleedka degaanka Cadale, oo hoos taga magaalada Bajeela ee Koofurta Gobolka Mudug, ayaa lagu dilay saddex ka tirsan Kooxda xiriirka la leh, Al-Qaacida, halka lagu qabtay labo kale, sida wararku sheegayaan.
Gaari ay wateen ayay sidoo kale la wareegeen ciidanka GM iyo DF, kuwaas oo sheegay in dableydu, jidadka ku duugayeen miinooyin, isla-markaana ugu danbeyn mid ka mid ah nafttood-haligayaashu gaariga ku qarxin lahaa saldhigga magaalada Wisil.
Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, Al-Shabaab, ayaa siyaadisay dhibaatooyinka dadka shacabka ee ku sugan degaannada Galmudug, gaar ahaan koofurta Gobolka Mudug, halkaas oo ay ka wadaan dhaca xoolaha, burburinta deggaannada iyo beegsiga shacabka.
Dhawaan waxa ay dab qabadsiiyeen tuulada Cadale, oo xalay howlgalku ka dhacay duleedkeeda, waxayna dhibaato joogto ah ku hayaan shacabka ku dhaqan degaannada Gurooleey, Xaaro, Dhaghaye, Cimaamad, Laas-gacameey iyo kuwa kale.
Dhawaan, mid ka mid ah saraakiisha XDS, oo KON la la hadlay, ayaa sheegay, in Al-Shabaab, billaabeen dhaqan cusub oo ah in ay dhacaan xoolaha, gaar ahaan geela iyo ariga, isla-markaana rartaan raashinka qanacsatada yaryar ku iibiyaan tuulooyinka.
Sida ay sheegayaan saraakiishu, Al-Shabaab culeyskii ugu xoogganaa ayay saarayaan Koofurta Mudug, tan iyo bartamihii sanadkii hore, markaas oo dagaallo qaraar ka dhaceen gobolka, inkastoo aan laga gaarin u jeedkii laga lahaa.